Zonke izilwane eplanethini yethu yokuvumelana nemibandela khona kanye ezungezile. Futhi ngenxa izici ezihlukahlukene, ezinye zazo wakhetha ukuqhuba ebusuku. Lokhu kusho ukuthi izilwane kunethonya umsebenzi wabo maximal ebusuku hhayi emini, ngesikhathi sasemini, bakhetha ukuphumula noma ukungenzi lutho.
izilwane ezizingela ebusuku
I izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo, ezihamba ebusuku, kukhulu. Ezinye zazo yilezi ezingavamile kakhulu futhi bembalwa ngesibalo, futhi abameleli ngabanye kanye zonke zitholakala kuphela kwelinye izwe. Nokho, kukhona labo, ezifana izikhova, isibalo sezinye izinhlobo oludlula 100, kodwa ngokuvumelana kweminye imithombo - ngisho 200. Ngakho, hlobo luni izilwane ezizingela ebusuku? Nazi ezinye zazo:
Izinhlobo eziningi amalulwane namalunga abo aseduze omndeni;
enesihlungu emgodini enesihlungu (kungathi izingalo ezingamakhulu amabili zinhlobo);
felines Iningi, kuhlanganise ikhaya;
izingulube zasendle kanye nabanye abaningi.
Njengoba kumnyama, nezilwane ukuhlinzeka ukudla yena kanye nenzalo yakhe, futhi emini ecasha emakhaya abo noma izimila obukhulu (izihlahla, notshani), elinde kwelanga ukuqhubeka ekuzingeleni futhi. Ngobunye ubusuku kusiza ukufihla ezilwaneni eziyingozi, futhi labo, yena, kunalokho, ukuze uthole inyamazane. Ngakho kukhona lokhu yomzabalazo waphakade.
Lezi okuzingela ezilwane ezingenamgogodla mollusk kahle ukubona ebumnyameni futhi bayakwazi fihla ngokwabo, ukushintsha umbala walo, ebavumela ukuba ukuzenzela ukudla ebusuku futhi aphunyuke ezilwaneni eziyingozi esiyingozi abangekho lalokhokulunga ukudla ngokwabo. Hambisa bese yokuzingela ngokuvamile Shoals ngabanye kuze kube 1,200. Phakathi yokudla banolaka kakhulu futhi kungaba ukuhlasela abatshuzi. Ngenxa yekhono layo ukuze blink obomvu nomhlophe ngesikhathi ekuzingeleni ithole isidlaliso "obomvu udeveli."
Abahlala lezi zilwane ebusuku olwandle, emini kwenziwe kumuntu ukujula (mayelana 700 m), futhi ngaleso kuhlwe ephakanyiswe eduze kwamanzi (mayelana 200 m) okuzingela. Lokhu izilwane ezinkulu, ngezinye izikhathi ukufinyelela 1.9 m ubude phezu kuye isiphuku sakhe sokuthunjwa futhi isisindo sabo - mayelana 50 kg. amaqiniso eqoshiwe kwezenzo ezihlukumezayo Humboldt squid tintfo engajwayelekile. Ngaphezu kwalokho, zingabantu amazimu: a tribesman kwalimala noma zibe buthaka ehlaselwa abameleli iphakethe. Ngenxa yalokho, bathela ngokushesha isisindo nobukhulu balezi, bukhoma, nakuba hhayi isikhathi eside - eminyakeni 1-2 kuphela. Habitat - kusukela Tierra del Fuego eCalifornia, futhi ubabonisa enyakatho kuya ogwini of Washington, Oregon, Alaska eBritish Columbia.
Lezi Abantu abahlukumeza abanye - abazingeli omkhulu ebusuku. Ukuze wenze lokhu, kahle ithuthukiswe zonke izinzwa: amehlo ezimpumputhe, izindlebe kanye nephunga. Kubhekwe yokuqothulwa, kodwa, ngenhlanhla, ngakwazi ukuthola izinombolo zabo eNyakatho Melika, bakuphi manje iqashelwe eduze. Lona zenyathi eziyivelakancane ka impisi ongavamile, esiphambanweni phakathi grey wolf futhi coyote. Ginger isilwane esingaphansi grey okuphikisana nalo, kodwa has imilenze eside nezindlebe, kodwa uboya emifushane, okubandakanya ebomvu umbala, imibala grey, omnyama ensundu. It wathola igama layo ngenxa imiphakathi Texas eziye wabusa umbala obomvu.
Lezi zilwane ebusuku kukhona linesizotha e ukudla, ukudla kwabo siqukethe: namagundane, onogwaja, raccoon, nutria, muskrat, izinambuzane, amajikijolo, ingcuba. Ngezinye izikhathi umhlambi izinyamazane ukuzingela. Ngokwabo nezimpisi obomvu ugwema ingozi: bayizisulu zokuphathwa izihlobo zabo kanye nezinye nezimpisi, zisizakala ngezinyamazane izingwenya abasha Bobcats. Ngaphansi kwezimo zemvelo, baphila iminyaka engaba ngu-8 ekuthunjweni - up 14. Ngaphambili, kwakunamabandla amathathu zenyathi nezimpisi obomvu, ezimbili ezazingaphesheya yokuqothulwa eminyakeni ezahlukene.
Izikhova: Thulile Hunter
Phakathi ukuhlukahluka esikhulu izikhova Iningi - izilwane ezizingela ebusuku. Owl - inyoni edla inyama empumalanga, adla siqukethe: namagundane (ukukhiqizwa okuyinhloko), izinyoni naphakathi, amaxoxo, izibankwa, izinambuzane; kusukela izinhlanzi izikhova kanye izikhova - izinhlanzi. Abanye abantu sigcinwe ekuthunjweni, ngenjabulo udle imifino fresh. Live kanye isidleke cishe kuyo yonke indawo (in the izidleke abalahliwe, agcwalise, idwala emifantwini, amanxiwa, ngaphansi ophahleni lwezindlu, phezu isicwebezelisi esivimba amanzi, ezakhiweni ezishiywe dengwane), abanye - in Burrows. 'Hwebani iyiphi sezwe kanye namathafa, ngaphandle Antarctica ezinye iziqhingi.
izikhova Iningi kukhona izimpaphe ezithambile, okubasiza ukuba buthule ukushona phansi phezu kwempango, ngakho-ke akakwazanga uqaphela umhlaseli. Lezi zinyoni ube nombono bukhali - kwanele 0.000002 nje Suites ukubona igundane esinqunyiwe ku obumnyama! izikhova Ukuzwa nazo ku ibhola: bayakwazi ukuzwa rustling of iphela kukhasa phezu kodonga! Lokhu "imishini" kubenza abazingeli kakhulu.
Zimbili subfamilies zalezi zinyoni: Lezi Izikhova Barn Owl. Lesi sakamuva zehluke amise okwenhliziyo esibukweni lokuqala ebusweni (izikhova kuba round), kanye abe phezu umunwe phakathi uzipho jagged. Kukhona 11 zezintaka esibayeni izikhova abahlala ezifundeni eziningi ezweni elaliyiSoviet Union, lezi zilwane ebusuku atholakala Belarus, emazweni aseBaltic naseNtshonalanga ye-Ukraine.
Izikhova ngokuvamile ukuzingela ebusuku, kodwa kukhona izinhlobo ukunikeza ukudla imini (uklebe, marsh, lalingumhume, elibhekwa njengabaThwa isikhova, inhlanzi isikhova nenhlanzi isikhova). Abesifazane kusukela kwabesilisa kuhluke ngobukhulu - "izintokazi" makhulu kodwa ube nombala ofanayo.
Laba bameleli be-elikhulu izikhova:
isikhova ukhozi - kekulu (ibanga 1.5-1.8 m amaphiko);
Mpunga Owl (kufika ku 1.5m);
isikhova Ural (ku-1.2 m).
Owl kungenziwa kudidaniswe isikhova ukhozi ngoba ubukhulu, kodwa abanayo "izindlebe" - ngokukhethekile izimpaphe ezikhulayo ekhanda, kepha efaniswe isilwane izindlebe.
Isikhova kulencane: North American elfovy isikhova (ubude 12-15 cm, isisindo 50 g); inkudlwana - elibhekwa njengabaThwa isikhova.
tarsier Spectral - Indonesian hlobo lwezinkawu ebusuku
Phakathi izakhamuzi eziningi nezilwane ezihlukahlukene esifundeni kutholakala exotic isilwane ebusuku Indonesia - tarsier Spectral, noma torsier, njengoba ibizwa. Libhekisela oda wezinkawu, futhi kungaba Laliphelela, ngoba isilinganiso ubukhulu 10 cm. Ukuhlala tarsier imikhaya emahlathini Indonesia kanye amapaki, zikhetha izihlahla nge emibhobhweni, lapho ukufihla emini futhi ubuthongo. Ukudla kwawo main siqukethe izinkumbi izinambuzane, kodwa, wezinkawu ekubeni, ungadli izithelo nemifino.
Torsiery - abatshuzi esiyingqayizivele: bangakwazi ngena ikhava eyodwa ibanga okweqa 10-20 izikhathi ubude bomzimba wayo. Yokuhamba endaweni evundlile ezifana kangaroo, nokubamba forelegs pursed futhi baphokophelele emuva. Lezi zilwane, ebusuku, ezisengcupheni - ngokwemvelo abantu eziyizinkulungwane ezimbalwa kuphela.
kakhulu Igama lezi wezinkawu kusikisela ukuthi izilwane zihlale zinokudla i nightlife asebenzayo. Isifunda izindawo - emahlathini eMelika Ephakathi naseNingizimu Melika, emigodini kwemithi ezihlabayo ukuthi ubusuku yokucasha inkawu ntambama. izilwane yasebusuku iqala cishe imizuzu engu-15 ngemva kwelanga: bephuma ziyofuna ukudla, kodwa eduze phakathi kwamabili futhi ubuyele enqabeni, lapho amahora 1.5-2 ukuphumula bese ngiphinde ngiphume ziyofuna ukudla. Kuyaphawuleka ukuthi ebumnyameni izinkawu abakubheki lutho ngakho neze asebenzayo kokuthwasa kwenyanga. Olwenziwe abacwaningi iso-retina wezinkawu labacwaningi elaliholwa esiphethweni sokuthi kwaba ngayizolo ngaphambi izilwane ngubani ngasizathu simbe ushintshe oda kosuku.